China Achievement Medals factory na ndị nrụpụta | Kingtai
Lelee nhọta anyị nke nweta nweta, nweta ihe ịga nke ọma, ihe nweta nweta ụgwọ ọrụ zuru oke. Onu ogugu anyi nke ihe nweta gunyere ọla edo, ọla ọcha na ihe nchara ọla.
Wepu kapeeti na-acha uhie uhie maka ihe nrite anyị nke Achievement Statuette, Medal Ribbons, Cases Nkwupụta, Trophies, Cups & Awards niile na nnukwu ọnụ ala. Ọlaọcha ọla edo & ọla kọpa kwesịrị ekwesị maka mmemme ngosi ọ bụla sitere na mmemme emume, mmata ụlọ ọrụ, Ngosi ụlọ akwụkwọ ma ọ bụ iji kwụghachi ndị otu ọ bụla ọtụtụ onyinye. Anyị nwekwara oke nhọrọ nke akara mma Medal Ribbons karịrị 60 agba agba agba dị iche iche site na mgbe niile Red, White & Blue to our Rainbow Ribbon. Ihe ngosipụta ihe ngosi anyị nke medal bụ nnukwu ihe eji emecha dị na agba dị iche iche.
All mfe ahaziri site Metal efere osise ma ọ bụ Free Omenala biri ebi Inserts gị imewe ma ọ bụ logo.
Anyị na-enyekwa Medals Custom, Lapel Pins & Badges, Ribbons & Presentation Cases mere nke aka gị na ọnụ ala dị ala.
Na-asọpụrụ ndị na-arụsi ọrụ ike ma mezuo ebumnuche ha na Medalitere nke Onwe ha site na K2 Awards! Anyị nwere ihe niile site na ọla edo, ọlaọcha na ọla kọpa ma ọ bụ akara ncha na-enwu gbaa, ha niile dị mfe ịhazi. Ihe nrite anyị na-abịa site na ịhọrọ nke rịbọnụ ejikọtara ọnụ yana, maka ntakịrị ntakịrị, ihe osise ahaziri iche na azụ. Fanye nrite site na iji ihe ịhọrọ gị nke ihe mmado nke na-egosi ọtụtụ ebe mmụta na egwuregwu nweta. Chọrọ iji njiri nke aka gị? Naanị bulite imewe gị ma ị ga-enweta ihe ngosi imewe n'ime oge azụmahịa 24. Mgbe ị na-erite uru na nnukwu ego anyị, ị nwere ike ịzụta karịa ma chekwaa!
Nke gara aga: Die anọrọ lapel pin
Osote: AKWALKWỌ AKWARKWỌ